Sidee dhakhso leh u gelisaa sawirka kadib markaad dhaleysid?
Caafimaadka dumarka Dhalashada
Doonista dumarka in ay caruur leedahay waa dabiici iyo sharci. Dhalashada wiilka ama gabadha, oo aan shaki lahayn, waa farxad weyn oo loo qabo hooyada. Habeen aan la seexin, walwalka xad-dhaafka ah - marka la barbardhigo farxada soo socota.
Kuwani waa dhibaatooyin ku meel gaar ah. Laakiin waxaa jira dhinac kale oo "bilaash" oo keena haweeney in ay ka cabsaneyso uur qaadida. Dabcan, haddii qof dumar ah uu ciyaaro isboorti muddo sanado ah, waxay ku sii jiri doontaa, ka dib marka ay hooyo noqoto, isbedelada ugu yaryar. Laakiin ma aha xaqiiqda ah in uu si buuxda u soo kaban doono iyo si aan caadi ahayn. Waxay ku xiran tahay hidaha iyo qaab nololeedka. Haddii qof dumar ah, iyada oo aan loo eegin jirkeeda jireed ka hor dhalashada, "ma qaadato" nafteeda, ka dibna sawirka lama huraan ah. Iyo, horraantii waxaad bilaabi inaad isku dhejiso naftaada, si deg deg ah iyo natiijada muddada dheer. Qof kasta oo miisaankiisu lumiyo, dabcan. Laakiin calaacalaha iyo calaamadaha maqaarka (striae), naasaha "leexsan" looma dhumin doono meel kasta. Sidaa darteed, haweenka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay horey u sii wadaan, taasoo ah, horey. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo jimicsiyo jimicsi haweenka uurka leh, ku sii soco hawada cusub iyo dhowr jeer maalintii si aad u codsatid kiriimyada dufanka nafaqada leh "meelaha sii kordhaya" iyo kuwa fadhiya. Aad u muhiim ah iyo is-boodid, haddii kale gacanta cellulitis-ka ayaa laguu siiyaa. Cab shaaha caanaha ka soo baxa bararka iyo sameynta biyaha lakabyada dufanka leh. Diuretics - kaliya sida uu dhakhtar u faray. Xasuuso xidhashada lafaha iyo faashad waa qasab. Ha cunin "laba", gaar ahaan cuntada kalooriyada, cuntada ay ku jirto nafaqada. Cuntadu waa inay ahaato mid heer sare ah, oo ay ku jirto fiber. Waxay faa'iido u tahay hooyada iyo ilmaha labadaba. Dumarka jecel shukulaatada, khatar ma aha oo kaliya qaab qurux badan, laakiin sidoo kale xasaasiyad ilmo mustaqbalka ah.
Sidaa daraadeed, dhalashadu way dhaaftay. Aynu aragno sida ugu dhakhsaha badan si aad u sawirto markaad dhasho ka dib? Talooyinka cusub ee mummified soo socda:
Ku quudi ilmaha naaska ugu dambeeyey, haddii aad rabto miisaan dheeraad ah "ka guuray" meeshii.
Badanaa la soco qalqaaliye, kaas oo noqon doona waxtar iyo ilmo.
Caadi ahaan, carruurta hurdo hawada ah waxay u egtahay sida "kuwa dhintay." Socodka, sidoo kale waxaad nasteen oo aad heshaa xoog cusub.
Kordhinta dhaqdhaqaaqa jirka, si tartiib tartiib ah ha u dhibin, sababtoo ah tani waxay saamayn xun ku yeelan doontaa caafimaadkaaga.
Qoob ka ciyaarka, haddii aad rabto.
Maqaarka saggyo, qaado maalin kasta qubeyska habeenkii.
Waa wax ku ool ah ka dib wiishka subaxda si ay u xoqaan meelaha dhibaatada leh tuugada lakabta, oo hore loogu qooyay biyo qabow (doorbidayaa saline) iyo si adag u xoqan. Biyo raaci maqaarka, waa lagama maarmaan in casaanka, waxaad sameyn kartaa oo aad u dhaqdhaqaajin kartaa dhaqdhaqaaq shukumaan leh, marka laga reebo caloosha hoose.
Kadib habraaca kor ku xusan iyo sii dheeraada inta lagu jiro maalintii, isticmaal kiriimyada nafaqada leh, kiriimyada iyo kiriimyada leh saameynta kor u qaadidda, iyaga oo ku beddelaya.
Ka hortagga calaamaduhu waxay isticmaalaan kiriimyada gaarka ah, daboolo kala duwan.
Haddii ay suurtogal tahay, iska qor xaruunta fayodhowrka. Marka loo eego hagidda macallinka, sawirka ayaa si dhaqso ah loo qaabeyn doonaa.
Mucaawin malab aad u firfircoon, wax kasta oo isku dhejis ah oo leh isticmaalka dadka waaweyn.
Masajin malab waa habka ugu wanaagsan ee loola dagaalamo cellulite. Miisaankani wuxuu hagaajiyaa wareegga dhiigga, wuxuu siiyaa maqaarka maqaarka, wuxuu nadiifiyaa, tones ilaa, xoojiyaa dheef-shiid kiimikaadka. Samee laba todobaad maalin kasta. Farsamada miisaanku waa mid fudud oo waa lagu sameyn karaa guriga. Massage waxaa lagu sameyn karaa jirka oo idil, marka laga reebo meelaha ka soo baxa qanjidhada noodhada: qoorta, armaajo, iwm. Mucaaradka waxaan qaadanaa malab dabiici ah, waxaan ku xardhay calaacalaha gacmaheena, ka dibna waxaan ku dhejineynaa meesha la duubay, waxaan u kaxeyneynaa bareelo. Calaacalaha waxaa lagu riixaa maqaarka waxaana si degdeg ah loo sii daayaa, waxaanu sameynaa dhowr jeer, laakiin aan ka badnayn 10 daqiiqo hal meel. Tartiib tartiib ah, ficillada waa in ay noqdaan kuwo feejigan oo dhakhso badan, iyadoo calaacalaha jidhka lagu riixayo in la jiido. Fikrad ahaan, malabku waa inuu noqdaa mid tiro badan. Malabkani wuxuu nuugay jeexjeex. Miisaanku wuxuu socdaa ilaa afartan daqiiqo. Nidaamku waa mid xanuun badan (gaar ahaan kan ugu horreeya), ka dib marka uu nabarka sii wado. Sidaa darteed, duugista noocan ah laguma talinayo dadka qaba xididdada xajmiga leh, haddii ay jirto dareen maskaxeed oo dheecaan leh, ka dibna waxay sameyn doontaa qaab nadiif ah. Sidoo kale laguma talin karo in la duugo sidoo kale bukaannada aadka u daran, dumarka inta lagu jiro caadada, iyo sidoo kale dadka qaba cudurrada thrombosis.
Waxay u egtahay in jumladaha caadiga ah iyo kuwa la yaqaan. Laakiin gabdhaha quruxda badan, haweenka xalinta dhibaatada - sida ugu dhakhsaha badan u soo qaadaan sawirka kadib marka dhalashada, mucjisooyinka ma dhicin. Iyo, sida ay yiraahdaan, "badbaadinta dadka qarqiya waa shaqada ay naftooda ku mici karaan". Haddii aan jimicsi lahayn, muruqyadaada marnaba ma keeni doontid tonus. Ka dib, waxa laga yaabaa inaad rabto inaadan miisaan dhicin, laakiin sidoo kale inaad hubiso in lumidu aanay ka muuqan muuqaalka. Miisaanka culus ee lumay miyirkiisu wuu ka buuxaa maqaarka cagaaran. Taasi waa sababta ay u habboon tahay in ay noqoto mid faahfaahsan: nafaqada (kuwa aan horay u naasneyn) - jimicsi - duugis - isticmaalka qurxinta alaabta. In la raadiyo foomamka habboon waxaa lagama maarmaan ah in lagu hogaamiyo xukunka - "ha samayn wax waxyeello ah". Caafimaadka dumarka ka dib uurka iyo dhalmada waa mid jilicsan, sida galaaska. Sidaa daraadeed, sida loo soo saaro sawirka si markaa loo gudbiyo ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in si caqligal ah loola xiriiro. Tusaale ahaan, ma isticmaali kartid suumanka iyo gaaban saameeynta saamaynta saunada si looga fogaado barar (sababtoo ah kuleylka maqaarka). Iyo maxaa ku saabsan laabta, waxaad weydiisataa? Haa, wax waliba waa isku mid: qubeyska qulqulka, jimicsiga gaarka ah, qurxinta sheyga iyo xirashada liisto haboon. Oo halkan waa wax aan la aqbali karin in la waayo. Guud ahaan, qaabka naasku wuxuu inta badan ku xidhan yahay xashiishka aad xiran tahay.
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in ay jiraan xeerar ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan loogu dhejiyo jadwalka marka la soo gudbiyo, ma ahan dumarka oo dhan in ay gaaraan natiijooyinka la rabay. Mararka qaar sababtu waxay noqon kartaa cudurro daba-dheeraada, xaddiga hoormoonka. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad la tashato takhtar, imtixaan lagaa qaado iyo daaweyn. Waa hagaag, haddii aysan ku caawin, markaas waxaa jira hal waddo oo kaliya: takhasus caag ah. Laakiin ha ilaawin in qalliinka balaastiggu uu yahay dhexgalka waxqabadka jidhka iyo cawaaqibta ay noqon karto midka ugu wareersan, ilaa natiijada halista ah.
Ha isku buuqin, oo iska daa. Waa lagama-maarmaan in la raaco talooyinka kor lagu soo sharaxay si joogto ah, natiijadiina ama goor dambe kuguma sugnaan doonto inaad sugto. Si kastaba ha noqotee, muuqaalkaaga, iyo sidoo kale caafimaadkaaga ayaa hagaajin doona.
Miyuu nin la joogi karaa wakhtigii uu umuli lahaa?
Suuxdinta markay dhalayso: nafleyda, nafsaaniga, daawooyinka
Sida loo xiro kahor dhalashada
Sida loo aasaaso xiriir isdaba xiga kadib dhalmada
Neefsashada habboon inta lagu jiro foosha
Sidee loo go'aamiyaa jinsiga ilmaha horey loo sii wado?
Sida loo soo celiyo dheef-shiid kiimikaad dhalashada kadib
Isku duub aalad kala duwan
Duubista moobiilka ee boodhka beerta
Sida loo kordhiyo layliyada naasaha
Sida loo galo qaylo-dhaanta shaqada ka dib fasaxyada
Jam of caleemaha geed
Nikolai Baskov ma guursan doono Sophia Kalcheva
Hooyada uurka leh ee Anna Sedokova ayaa sawir muuqaal ah ku muujisay dharka
Sida loo daryeelo dahabka leh luul
Nooc-maskaxeed ee ka qayb-qaadashada aad jeceshahay
Guryaha bogsashada ee caleemaha caleenta
Sida loo nadiifiyo birta guriga
Gardarrada gabadh casri ah
Tayada shaambo waxay ku xiran tahay ka kooban
Kabaha casriga ah ee casriga ah
Wareegyo dhar ah oo loogu talagalay haweenka buuxa 2015: muuqaalka guud ee moodooyinka ugu dambeeyay iyo midabada